Isihloko se-Ultrasonic: iseli lokugeleza - iHielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "ukugeleza kweseli"
I-flow cell noma i-flowor reactionor iyisisekeli, okwenza sikwazi ukucubungula okubonakalayo, isb nge-sonication, kwinqubo eqhubekayo yolayini. Izinqubo ze-Ultrasonic zingaqhutshwa njengenqubo ye-batch noma kwimodi yokugeleza okuqhubekayo kusetshenziswa iseli yokugeleza ye-ultrasonic. Izinzuzo zenqubo ye-Ultrine in-line isebenzisa i-flow cell reactionor ukucubungula okufana kakhulu kokuphakathi, ukusetshenziswa kwengcindezi, okuyisisekelo esibalulekile, kanye ne-sonication elula, esebenza kahle yamanani amakhulu.
Impompo isuthisa izinto ezingavuthiwe ku-ultrasonic flow cell reactionor, lapho amandla e-ultrasonic angagxila kakhulu futhi agxiliswe ngevolumu encane. Lokhu kubangela ukucubungula okufana kakhulu nekhwalithi ephezulu yomkhiqizo. I-valve yokucindezela emuva ingasetshenziswa ukwandisa umfutho esitokisini sokugeleza. Lokhu kukhulisa ukuqina kwe-acoustic, okuholela ekuphakameni ngokweqile kwe-shera hydraulic kanye nengcindezi nokuhlukahlukana kokushisa ngenxa yokufakwa ngamandla kobudlova kwamabhamuza we-cavitation.
I-Hielscher Ultrasonics inikeza izinhlobo eziningi zamaseli okugeleza nezinsimbi zokuphendula ezinosayizi abahlukahlukene namajiyometri. Kusetshenziswe kuhlanganiswe ne-Hielscher processors ephezulu yokusebenza kwe-Hielscher, ukumiswa okulungile kwe-sonotrode kanye nokugeleza kweseli kuvumela izimo zenqubo ephezulu kanye nokuphuma okuphakeme kwe-sonication.
Funda kabanzi mayelana nokuphendula kweseli kwe-ultrasonic flow kanye nokusetshenziswa kwelebhu, umshayeli wezindiza kanye nokusebenza kwezimboni!